फोटो समाचार – Page 183 – Etajakhabar
क्यूवामा एउटा अचम्मको चलन छ । जहाँ ज्यूँदै मानिसलाई टन्न रक्सी पिलाएपछि उसलाई खाडल खनेर गाड्ने गरिन्छ । तपाईं अचम्ममा पर्नुभयो होला । तर यो सत्य हो । क्यूबामा बुजी अर्थात् रक्सी पर्वको नामले प्रचलित यो परम्परामा मानिसलाई काठको बाकसमा बन्द गरेर खाडलमा पुरिन्छ । टन्न रक्सी पिएको मानिसलाई बाकसमा हालि सडकमा घुमाइन्छ र उसको पछाडी हजारौँ मानिस भेला भई खाडलमा पुर्ने गर्छन् । वास्तवमा उनीहरुले काठको बाक...
तपाईंको दाह्री छैन वा कम पलाएको छ ? यसो गर्नुस् मज्जाले पलाउँछ
अहिले युवामा दाह्री पाल्ने फेसन नै चलेको छ । केही फरक देखिन चाहनेहरूले आफ्नो दाह्री र जुँगालाई विभिन्न स्टाइल दिन सक्छन् । तर, कतिपय युवा चाहना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अनुहारमा रौँ नआएर चिन्तित हुन्छन् । अनुहारमा रौँ बढाउन चाहनेलाई भारतीय हेयर क्लिनिककी डा. एस सरिनको सुझाब यस्तो छः दाह्री र जुँगा पाल्ने सोख पुरुषमा धेरै पहिलादेखि नै छ । केही युवा भने चाहना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अनुहारमा दाह्रीजुँगा...
सेक्सटोय प्रयोग गर्न नजान्दा युवकको लिङ्गमा अड्कियो रिङ्ग, निकाल्न डाक्टरलाई समेत सकस
थाइल्याण्डमा सेक्स टोय प्रयोग गर्न नजान्दा एक युवकलाई आपत् परेको छ । सेक्स टोयको प्रयोगको असावधानीका कारण ती युवकको लिङ्गमा फलामको रिङ्ग नै अड्कीयो र सयौं प्रयास गर्दा पनि त्यसलाई निकाल्न उनी असफल भए । केही सीप नलागेपछि डाक्टर गुहार्नुको उनीसँग विकल्प रहेन । घरमै बसेर गरिरहेका बेला उनको लिंगमा त रिङ अड्किएको थियो । सामान्य असावधानिका कारण आफ्नो पुरुषत्व नै गुम्ने डरले उनले तत्काल एम्बुलेन्सलाई ख...
डा. सबिना श्रेष्ठ प्रधान विवाहपछि प्रत्येक दम्पतिको एउटा स्वाभाविक सपना हुन्छ– घरमा बच्चाको हाँसो गुन्जियोस् । तर चाहँदा–चाहँदै पनि सबैको यो सपना पूरा हुन सकिरहेको हुँदैन । कुनै–कुनै महिलाले सन्तान जन्माउन सक्दैनन् । यस्ता दम्पत्तिमध्ये धेरैले आफ्नो जीवन एक्लो र फिका अनुभव गर्छन् । आज पनि हाम्रो समाजमा सन्तान नहुनुलाई भगवानको श्राप वा पूर्वजन्मको अभिशाप भन्दै हेलाँ गर्ने चलन छ । झण्डै १५ प्रतिश...
काठमाडौँ । १. मोटोपना बढाउँछ अमेरिकामा ३ वयस्कमध्ये २ जना र ३ बालबालिकामध्ये १ जना मोटोपनाको समस्याबाट पीडित छन् । अध्ययनअनुसार हल्का पेयपदार्थ तथा अन्य चिनीजन्य पेय मोटोपनाको मुख्य कारक हुन् । अर्को अध्ययनमा जुन बालबालिकाले दैनिक १२ औंस थप सोडा प्रयोग गर्छन्, तिनीहरु २ वर्षभित्र मोटो हुने सम्भावना ६० प्रतिशत हुन्छ । यस्तो हुनुको कारण सोडामा हुने बढी क्यालोरी नै हो । एउटा सोडाको क्यानमा १ सय ५...
आँगनमा गोहीको बच्चा फेला पर्यो
कञ्चनपुर, ८ कात्तिक । कञ्चनपुरको बेलडाँडी नगरपालिका–७ मा विकास सेठीको आँगनमा आइतबार साँझ लोपोन्मुख अवस्थाको गोही फेला परेको छ । घर आँगनमै गोही फेला परेपछि सेठी परिवारले बेलडाँडी रेञ्जपोस्ट कार्यालयमा खबर गरेका थिए । गोहीको उद्धार गरी शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको सीमसार क्षेत्रमा छाडिएको रेञ्जपोस्टका प्राविधिक उत्तमबहादुर विष्टले बताउनुभयो । फेला परेको गोहीको बच्चाको तौल १० किलो रहेको ...
यस्तो छ नायिका रेखाको ‘ब्युटी सेक्रेट्स’
काठमाडौँ । भारतीय नायिका रेखा बलिउड फिल्म उद्योगमा सन् १९७० को दशकदेखि नै संलग्न छिन् । उनी सबैभन्दा सुन्दर नायिकाका रुपमापनि परिचित छिन्, जसले सत्तरीको दशकदेखि अहिलेसम्मका नायकनायिकासम्म संगै काम गरिसकेकी छिन् । उनले आफ्नो सौन्दर्यलाई अहिलेसम्म कसरी कायम राखेकी छिन् । आउनुस् थाहापाउनुस्, उनको ब्युटी सेक्रेट्स ः कपाल स् कपालको महत्व राम्रोसंग बुझेकी रेखाले यसलाई राम्रो हेरविचार गर्छिन् । उनले...
कृत्रिम दाँत कसले किन राख्नुपर्छ ?
डा. विशालबाबु बस्नेत धेरैजसो अवस्थामा दाँतको असह्य पीडा सहन नसकेर बिरामीहरू दाँतसँगै क्रुद्ध हुन्छन् र दाँतको उपचार गराएर बचाउनेभन्दा पनि निकाल्ने निर्णय गर्न पुग्छन् । पछि दाँतको अभावमा विभिन्न अप्ठ्यारा र असहजता हुन थाल्छ अनि पछुतो मान्न पुग्छन् । मुख स्वास्थ्य नीति २०७० अनुसार २०१२÷२०१३ मा एक चौथाइ जनतामा मुखको पीडा र असहजता विद्यमान छ । प्रकृतिले दिएका दाँत सकेसम्म बचाउनु नै बुद्धिमानी हो...
यसरी रोक्न सकिन्छ अनावश्यक भिडियो
काठमाडौँ । वेबसाइटमा आजभोलि भिडियोको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । फोरजी नेटवर्कको कारण मोबाइलमा भिडियो हेर्न पनि निकै सजिलो भएको छ । तर, वेबसाइट ओपन गर्नासाथ स्मार्टफोन, ट्याब्लेट तथा ल्यापटपमा आफँै भिडियो ओपन हुने समस्याले धेरैलाई दिक्दारी पनि बनाउने गर्छ । यस्ता अधिकांश भिडियो विज्ञापन हुने गर्छन् । इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सबैलाई यस्तो समस्याले वाक्क नै बनाउँछ । यो समस्याबाट छुटकारा पाउन अडियो बन्...
आज मिती २०७३ साल कात्तिक ८ गते सोमवारः- हेर्नुहोस् आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल
श्रीसूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु,सौम्यनाम संवत्सर,शाके १९३८,विक्रसम्वत २०७३ साल कार्तिक ८ गते सोमवार नेपाल सम्बत ११३६ कौलागा, सन् २०१६ अक्टोबर २४ तारिक कृष्णपक्ष नवमी तिथि अपरान्ह ४ वजेर ५१ मिनेटसम्म, अश्लेषा नक्षत्र राती २ वजेर १२ मिनेटसम्म, शुभयोग राती १ वजेर १६ मिनेटसम्म, गरकरण अपरान्ह ४ वजेर ५१ मिनेटसम्म, आनन्दादियोग सौम्य, सूर्य तुला राशीमा, चन्द्रमा राती २ वजेर १२ मिनेटसम्म कर्कट उप्रान्त सिंह रा...
Previous 1 … 182 183 184 … 233 Next